काठमाडाैं, १६ जेठ । नेपालमा आज एकै दिन १ सय ७० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् । यससंगै नेपालमा १ हजार २ सय १२ जना सङ्क्रमित पुगेका छन् । आज सम्ममा ५२ जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको छ । प्रदेश नम्बर २ र ५ मा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमित रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गर्दै आएको नियमित जानकारीका क्रममा प्रवक्ता डा.विकास देवकोटाले संक्रमितको संख्या १ हजार २ सय १२ पुगेको जानकारी दिए।
संक्रमित हुनेमा झापाका २८, सप्तरीका ४, बाराका ४, पर्साका ५, म्याग्दीका १, बाँकेका १०, नवलपरासी बर्दघाटका २, कपिलवस्तुका ५१, रौटहटका ५६, सर्लाहीका ५, रुपन्देहीका १ र दाङका २ जना रहेका छन् । संक्रमितमध्ये हालसम्म २०६ जना निको भएर घर फर्किइसकेका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १९ जना डिस्चार्ज भएका छन् ।
आज सम्म क्वारेन्टाइनमा ९९ हजार ३ सय ३६ जना रहेका छन् । हालसम्म आइसोलेसनमा देशभरी १ हजार जना रहेका छन् । अब भारतबाट आउनेहरुलाइ थप व्यवस्थित बनाइने र उनीहरुलाई हेल्थ किट उपलब्ध गराउने डा. देबकोटाले जानकारी दिए । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको सङ्ख्या बढिररहेको र अझै बढ्न सक्ने भन्दै डा. देबकोटाले क्वारेन्टाइनहरु थप व्यवस्थापन गर्ने पनि बताए ।
अब कोरोना थप फैलन सक्ने भएकाले सर्तक रहन आवश्यक रहेको पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । समुदायमा दीर्घ रोगी, जेष्ठ नागरिक र कमजोर स्वास्थ्य भएकालाई यसको जोखिम बढि भएकाले सर्तक रहन पनि डा. देबकोटाले आग्रह गरे। अब भने सङ्क्रमितको अवस्था हेरिकन, सामान्य, जटिल, अति जटिल अवस्था छुट्याएर उपचार गर्ने हुन पनि सक्ने डा. देबकोटाले बताए ।